Ahoana ny fanamboarana ny Winterboard hiasa amin'ny iOS 9 | Vaovao IPhone
Noho ny fahatongavan'ny iOS 9 Jailbreak tampoka dia manana asa betsaka mialoha izy ireo ny mpamorona hanavao ny rindran'izy ireo rehetra ary hahatonga azy ireo ho vonona amin'ny Jailbreak vaovao, izany hoe ampifanaraho amin'ny rindrambaiko iOS farany izay azo atao Jailbreak. Raha nanandrana nampiasa Winterboard tao amin'ny iOS 9 ianao dia ho hitanao fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy, na mijanona tsy miasa mivantana. Izany dia satria hitanao fa ny fizahan-tany Winterboard dia tsy namboarina tamin'ny iOS 9 satria mbola eo amin'ilay teboka fandaharana mitovy ihany izy io mandraka ankehitriny, ao amin'ny iOS 8. Soa ihany, azo atao ny mampiasa Winterboard hiasa amin'ny iOS 9 amin'ny alàlan'ny andiam-panovana izay hasehonay anao amin'ny iPhone News tsikelikely.
Ahoana ny fomba hiasa Winterboard amin'ny iOS 9
Izahay dia mitady ilay fanovana iFile amin'ny Cydia ary ampidino.
Mametraka ny fisie Winterboard .deb amin'ny fitaovana iOS 9 avy amin'ny iFile izahay. Voalohany dia tsy maintsy ataontsika izay nanesorantsika tanteraka ny fametrahana ny Winterboard raha toa ka napetraka teo aloha isika.
Handeha isika "/ fampiharana»Ao amin'ny iFile hahitana« winterboard.app », izao dia tsindrio ny marika fiantsoana izay hitantsika eo akaikin'ny rakitra ary ovainay ny anarana hoe«winterboard1.app".
Mametraka iCleaner avy any Cydia izahay.
Ankehitriny dia mampiasa ny "madio" fiasan'ny iCleaner.
Izahay dia manao ilay resource mahazatra izay angatahin'i iCleaner hataonay.
Rehefa tafaverina indray dia miverina amin'ny «/ applications» ao amin'ny iFile ary miantso ny anarana hoe «winterboard1.app» mba hanome azy ny anarany tany am-boalohany hoe «winterboard.app».
Manomboka iCleaner indray izahay ary mihazakazaka ny fanadiovana indray.
Aorian'ny fanarahana ireo dingana etsy ambony, noho ny antony somary sarotra dia tokony hiasa ho anao indray izy ity. Fantatsika avy eto fa somary misavoritaka ny dingana, saingy voamarin'izy ireo fa mandeha izy io, satria ny mpamorona azy manokana no nitatitra fa io no hany fomba amin'izao fotoana izao ny fanaovana ny Winterboard hiasa ao amin'ny iOS 9.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Ahoana ny fanamboarana ny Winterboard hiasa amin'ny iOS 9
Jos131313 dia hoy izy:
Ahoana no hametrahako ny .deb? Misintona azy voalohany ary mametraka avy amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny programa 1?
Valiny tamin'i Jos131313
kupra dia hoy izy:
Miaraka amin'ilay tweak Anemone dia manao toy izany koa ary mifanaraka amin'ny ios9.
Mamaly an'i kupra
Hatramin'ny omaly 14 dia nametraka winterboard aho ary tena mandeha tsara izany. Manana sary masina vaovao sy bara maha-sodo ahy vaovao aho.
Mila fanampiana aho, sambany aho nametraka cydia ary tsy fantatro ny fomba fiasan'izy io na ny zavatra alainao, tiako ny iPhone ho tsara kokoa ary esp rehetra
Valiny tamin'i Jefferson